Budata AccuBattery APK maka Android
Free Budata maka Android (3.20 MB)
AccuBattery bụ ngwa ndọtị ndụ batrị mkpanaka na-enyere ndị ọrụ aka ịmụta ikike batrị.
AccuBattery, ngwa ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na ekwentị gị na mbadamba ihe site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-enye gị ohere ịmụta ikike batrị ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba na mAh nezie. Dị ka ọ na-adịkarị, batrị nke ngwaọrụ mkpanaka na-amalite ịla niyi ha mgbe oge ụfọdụ ejiri ya. Batrị eji ogologo oge na-amalite idobe ngwaọrụ gị ka ọ gbanye obere oge. Ka ị na-anaji ngwaọrụ mkpanaka gị ugboro ugboro, ndụ batrị gị ga-ebelata. Nebe a, na AccuBattery, ị nwere ike ịmụta ole ndụ batrị dị mkpụmkpụ yana ole na-ebelata arụmọrụ ya.
Budata Battery Optimizer
Batrị Optimizer bụ ngwá ọrụ na-ebuli batrị laptọọpụ arụpụtara iji duzie ndị ọrụ na usoro nyocha na ule dị elu ka laptọọpụ ha nwee ike iji batrị ha ogologo...
AirBattery bụ ngwa egosi chaja maka ndị ọrụ ekwentị gam akporo na-eji ekweisi Bluetooth Apple. Enwere m ike ịsị na ọ bụ ngwa nlekota batrị kacha mma dakọtara na ekweisi Bluetooth...
Budata Super Battery
Ngwa Super Batrị na-enye atụmatụ na-abawanye ndụ batrị na ngwaọrụ gam akporo gị ebe ị nwere nsogbu...
AccuBattery bụ ngwa na-egosighi naanị ike batrị. AccuBattery na-enye gị ohere ịgbatị ndụ batrị gị dabere na eziokwu sayensị. Ngwa nwere ike ịtọ oti mkpu ka ịwepụ batrị gị ka ọ ruru ọkwa ụfọdụ. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike igbochi oke iyi batrị ekwentị gị.
AccuBattery na-enyekwa gị ọnụ ọgụgụ ojiji batrị ozugbo. AccuBattery, nke na-atụ ka ngwa ngwa na-agbapụ batrị gị, nwere ike ịkọ ngwa nke kacha eri batrị.
Nha faịlụ: 3.20 MB